Kurumidza Kopa uye Chengeta Mifananidzo uye Meseji neIOS 15 Dhonza & Kudonhedza | IPhone nhau
Miguel Hernandez | 15/10/2021 15:00 | iOS, iOS 15, iPhone, Zvidzidzo uye zvinyorwa
iOS 15 Iyo ndiyo inoshanda system yekambani yeCupertino iyo yakagamuchira kushoropodzwa kwakanyanya mumakore apfuura, hapana vashoma vashandisi vakayambuka iyi yekuvandudza se "zvishoma zvitsva", muchokwadi, iyo yekurodha mitengo yeIOS 15 ndizvo chaizvo zvisinganyanyo kufarirwa mundangariro. Nekudaro, chokwadi ndechekuti iOS 15 inosanganisira zvakawanda zvezvinhu zvitsva zvinoita kuti hupenyu hwedu huve nyore.
Isu tinokuratidza mashandisiro aungaita Dhonza & Kudonhedza muIOS 15, chimiro chinokutendera iwe kuteedzera nekuteedzera zvinyorwa pakati pekushandisa, pamwe nekudhawunirodha mifananidzo yakawanda kubva kuSafari. Nematanho aya akapusa iwe unozogona kushandisa yako iPhone kana iPad seyechokwadi nyanzvi.
1 Kopa uye unama zvinyorwa neDhonza & Kudonhedza
2 Kopa uye unamate pikicha neDhonza & Kudonhedza
3 Dhawunirodha akawanda mafoto kubva kuSafari
Kopa uye unama zvinyorwa neDhonza & Kudonhedza
Imwe yeakanyanya kududzwa Dragira uye Kudonhedza mashandiro ndizvo chaizvo izvo zve teedzera uye unama zvinyorwa, uye kwandiri zvinoratidzika kunge zvinonyanya kubatsira. Kuteedzera uye kunama chinyorwa uchishandisa Dhonza & Kudonha kuri nyore kwazvo, tinokuratidza:
Sarudza iwo mavara iwe aunoda kuteedzera, ese akazara zvinyorwa uye zvirevo. Kuti uite izvi, penya kaviri pane zvinyorwa uye fambisa iyo inosarudza.
Zvino pinda zvakaoma / refu pane iwo mavara (3D Kubata kana Haptic Kubata).
Paunenge wasarudza icho, usina kuchisunungura, chiisa pamusoro (swype kumusoro).
Iye zvino nerumwe ruoko iwe unogona kufamba neIOS, zvese uchishandisa bhawa repazasi uye kuenda kuchishandiso chaunoda, pasina kuburitsa iwo mavara.
Zvino sarudza iro remavara bhokisi rechikumbiro chaunoda uye kana iyo icon (+) yaonekwa neruvara, isunungure
Ndiko kupusa kwaunogona kuteedzera nekuteedzera zvinyorwa pakati pekushandisa kwakasiyana.
Kopa uye unamate pikicha neDhonza & Kudonhedza
Imwe yemikana mikuru yeiyo iOS 15 Dhonza & Kudonhedza sisitimu ndizvo chaizvo izvo zve kukwanisa kutora uye kuunza mifananidzo kune maficha ayo anotifadza nyore.
Sarudza mufananidzo waunoda kutevedzera. Kuti uite izvi, tinya nesimba / refu pamufananidzo (3D Kubata kana Haptic Kubata).
Panguva ino, kana uchida, iwe unogona kuwedzera mamwe mafoto nekuabaya iwo nerumwe ruoko.
Iye zvino unogona kufamba neIOS, zvese uchishandisa bhawa repazasi uye kuenda kuchishandiso chaunoda, pasina kudonhedza iwo mavara.
Zvino sarudza iko kunyorera uko iwe kwaunoda kuteedzera iyo pikicha kana seti yemifananidzo uye kana iyo (+) icon painowoneka mutema, isunungure.
Dhawunirodha akawanda mafoto kubva kuSafari
Izvi zvinoita kwandiri pasina mubvunzo chimwe cheakanyanya mashandiro, uye ndizvozvo iwe uchave unokwanisa kudhawunirodha semazhinji mafoto sezvaunoda kubva kuSafari pasina kudhawunirodha imwe neimwe.
Enda kuGoogle Mifananidzo uye tsvaga zvaunoda. Kuti uite izvi, tinya nesimba / refu pamufananidzo (3D Kubata kana Haptic Kubata).
Iye zvino unogona kuenda wakananga kuIOS Mifananidzo application, zvese kuburikidza neMultitasking uye zvakananga kubva kuChitubu. Rangarira, pasina kuburitsa mifananidzo yakateedzerwa.
Zvino sarudza iko kunyorera uko iwe kwaunoda kuteedzera iyo pikicha kana seti yemifananidzo uye kana iyo (+) icon painowoneka mutema, donhedza mifananidzo yakateedzerwa muPikicha app.
Yakanyanya kupusa iyi nyowani nyowani yekutora akawanda mafoto panguva imwe muIOS 15.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Kurumidza kuteedzera uye chengeta mafoto uye mameseji neIOS 15 Dhonza & Kudonhedza